नहुने चुनावको पछाडि नलागौं, महाधिवेशनको तयारी थालौं : महामन्त्री कोइराला « Naya Page
नहुने चुनावको पछाडि नलागौं, महाधिवेशनको तयारी थालौं : महामन्त्री कोइराला
काठमाडौं, १० फागुन । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले वैशाखमा चुनाव सम्भव नभएकाले महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई आग्रह गरेका छन् । ‘सरकारले वैशाखका लागि चुनाव घोषणा गरेको छ, तर चुनाव हुँदैन । त्यसैले चुनावको होइन, पार्टीको महाधिवेशनतिर ध्यान दिनुपर्छ,’ डा. कोइरालाले भने ।
नेपाल विद्यार्थी संघ त्रिवि इकाइ समितिको रिले अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आइतबार कीर्तिपुर पुगेका महामन्त्री कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले घोषणा गरेको मितिमा चुनाव गराउन नसक्ने बताए ।
‘ओलीले चुनावको मिति घोषणा गरेका छन्, तर त्यो मितिमा उनले चुनाव गराउँदैनन् । किनभने अहिलेसम्म त उनीहरू फुटेकै छैनन्,’ कोइरालाले भने, ‘जब फुट्छन् तब मात्रै उनीहरूसँग स्वतन्त्र चुनाव चिह्न हुन्छ । एउटालाई सूर्य चिह्न दियो भने अर्कोले मुद्दा हाल्छ, त्यसले तीन–चार महिना लम्बिन्छ । कि त दुई वटैलाई छुट्टाछुट्टै दिनुप¥यो । तर, म यो सम्भावना देख्दिनँ ।’
अनशनमा यसअघि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्री डा. रामशरण महत र अर्जुननरसिंह केसी, केन्द्रीय सदस्यहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू, नवीन्द्रराज जोशी, गुरुराज घिमिरेलगायतका नेताहरूले अनशनस्थल पुगेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । माग पूरा नभएसम्म निरन्तर अनशन जारी राख्ने इकाइ अध्यक्ष अधिकारीले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट